सदन अवरुद्ध नभए तीन दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री - Karobar National Economic Daily
सदन अवरुद्ध नभए तीन दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री
query_builderJune 2, 2017 8:19 AM supervisor_accountजगन्नाथ दुलाल visibility501
बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान
काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिका लागि दिएको सात दिनको समय बुधबार गुज्रिएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन बहुमतीय प्रक्रियामा गएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता मोहनप्रसाद वाग्लेका अनुसार राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेकाले नेपालको संविधानको धारा २९८ (३) बमोजिम बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी हुन् ।
यही जेठ ११ गते राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएर राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नका लागि समय भने तोकिएको छैन । अब यससँगै नयाँ प्रधानमन्त्री बहुमतीय प्रक्रियाबाटै चयन हुनेछ ।
संसद् बैठकमा अवरोध नभए छिटोमा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन सक्छ । एक दिन उम्मेदवारी आह्वान, अर्को दिन दाबी विरोध र नामावली प्रकाशन अनि तेस्रो दिन निर्वाचन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री तीन दिभित्र निर्वाचित गर्न सकिनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै सदनमा अवरोध गरेकाले बिहीबार बहुमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका लागि आह्वान गर्दै राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर सुनाउने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
एमालेले अवरोध गरेका कारण बैठक अघि बढ्न नसकेपछि संसद् सचिवालयले यही जेठ २१ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन गरेको छ । एमाले सांसदले सदन चल्न नदिएपछि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र संसद्का महासचिवलाई पठाएकी छन् ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख घर्तीले जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । संसद् स्थगनकै अवस्थामा पनि संसद् सचिवालयले निर्वाचन कार्यक्रम भने अघि बढाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि भने मतदान प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । जति छिटो संसद् अवरोध टुंगिन्छ उति नै छिटो नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन बाटो खुल्नेछ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार संसद् बैठकमा जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सूचना सार्वजनिक गर्न कुनै कानुनी बाधा छैन । यही विषयमा छलफलका लागि शुक्रबार बिहानलाई सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएकी छन् । बैठकमा सहमति जुटाई प्रधानमन्त्री निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनबाट देउवा, एमाले अलमलमा
बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भएपछि उम्मेदवार को–को बन्लान् भन्ने चासो सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने देखिएको छ ।
सभापति देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरमलगायत दललाई आग्रह गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउने समझदारीअनुसार नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
देउवालाई समर्थन हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि देउवालाई समर्थन गर्ने भएको छ । अन्य दलले भने औपचारिक धारणा अघि सारेका छैनन् । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले तराई–मधेसकेन्द्रित सबै दलले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने दाबी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल यस विषयमा खुल्न चाहेनन् । आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को बन्ने भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री निर्वाचन जेठ २१ मा’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले यही जेठ २१ गते नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन हुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गरे पनि सोही दिन निर्वाचन हुने बताए ।
“एमालेको अवरोधका कारण बिहीबार संसद् बैठक बस्न सकेन”, उनले भने, “अब अर्को बैठक जेठ २१ गते बस्दै छ, सायद भोलि (शुक्रबार) नै सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुहुन्छ, त्यसले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ ।” उनले भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको विषयमा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री निर्वाचन
शिक्षामा नयालाई अवसर नदिने ?
संविधान कार्यान्वयनको गोरेटो
कोरियाबाट बिमा रकम नलिइ फर्कन्छन् नेपाली
पञ्चेश्वरको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तिम चरणमा
October 24, 2017 6:15 AM